Labo caruur ah oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaLabo caruur ah oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Muqdisho
July 11, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo caruur ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho saakay oo Arbaco ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Gaari ayaa jiiray labada caruurta ah oo ka tallaabayay waddo kutaala degmada Waaberi ee Muqdisho.
Labo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay shilka.
Labada caruur oo da’dooda lagu qiyaasay 8 ilaa 13 jir ayaa ahaa walaalo, sida qof dadka deegaanka katirsan uu sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Sababta keentay shilka ayaa la baarayaa, sida ay sheegeen ciidanka booliisku.
December 27, 2017 Mareykanka oo sheegay in ay 13 maleeshiyo Al-Shabaab ah ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya